Kyaing Kyaing Kone - Myanmar Actress Model (7).jpg
Image 1 of 16 Myanmar Actress Model
# Monday, September 28, 2009 10:26:58 AM
# Wednesday, November 11, 2009 9:22:00 AM
sexman17110 # Friday, April 9, 2010 10:03:03 AM
လိုး ချင် တာ လီး ကို ယား လို့
# Thursday, July 29, 2010 7:20:43 PM
Kyaw Htike Kyi writes:
ဖြဲကားပြီး အားရပါးရ လိုးပစ်လိုက်ချင်တာကွာ
# Thursday, October 28, 2010 8:08:38 PM
ပိုးစိုးပက်စက် ပက်လက်ပိုးလိုးကို လိုးချင်တာ တောင်လိုက်တဲ့လီးများမပြောချင်လောက်အောင်ပဲ
# Sunday, November 14, 2010 10:43:41 AM
# Wednesday, December 1, 2010 7:13:53 AM
as above Unregistered user
# Monday, December 13, 2010 3:43:43 AM
loo maung writes:
my လီး is verry big. i want to လိုး ur စပတ်. thank you
# Tuesday, December 21, 2010 6:36:54 PM
janicejanicez004 # Saturday, December 25, 2010 10:38:35 AM
# Wednesday, January 12, 2011 12:49:40 PM
အိုမဟုတ်တာ သူကလဲး တစ်ခါထဲးပါ။ Unregistered user
# Thursday, January 13, 2011 12:14:43 PM
# Tuesday, February 15, 2011 5:28:50 PM
# Tuesday, April 19, 2011 10:16:14 AM
# Monday, May 2, 2011 9:35:38 AM
video, စောက်ပတ် စိုးမြတ်သူ လငိနသ naked, Unregistered user
# Wednesday, May 11, 2011 8:32:25 PM
# Friday, May 20, 2011 2:27:03 PM
မင်းစောက်ပတ်ကဘယ်သူတွေလိုးထားလိုးထား ငါကတော့လိုးနေအုံးမှာလေ Unregistered user
# Tuesday, May 31, 2011 4:53:36 AM
lar gyi writes:
# Saturday, June 4, 2011 7:18:35 AM
# Monday, June 20, 2011 10:14:22 AM
# Monday, June 20, 2011 10:18:51 AM
ပိုးစိုးပက်စက် ပက်လက်ပိုးလိုး ပက်ပက်စက်စက်လူးလူးလဲးလဲး.....သက်မွန်မြင့်စပတ်ကိုလိုးချင်တယ်
# Monday, June 20, 2011 10:34:33 AM
# Monday, June 20, 2011 10:37:42 AM
# Wednesday, June 22, 2011 2:36:58 PM
အော်.....အ၀ိစွဇာကြောင်.တဏှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်မှန်ပါလားနော် ဒါပေမဲ.ဒီတဏှာတုံးကြီးကအဆီတ၀င်းဝင်းနဲ.ဆိုတော.ကိုယ်လည်းပဲ.......ဂလု ။
# Thursday, June 23, 2011 8:37:26 AM
သင်းသင်းစိုး ကို လိုးချင်တယ်
# Wednesday, June 29, 2011 10:01:59 AM
# Saturday, July 2, 2011 9:34:16 AM
# Sunday, July 3, 2011 9:16:00 AM
မြ ဝ တီ က နေနဒီ ကို ပဲ လိုး ချင် တယ်
# Tuesday, July 12, 2011 11:35:00 AM
လိုးချင်တာကခဏခဏ စောက်ပတ်လေးကခက်၇ွ၇ွ တခါလိုပြီးမ၇ပ်သေး ဆက်တိုက်လိုးဖို့အားမွေးသေး ကြိုက်၇င်ဆက်သွယ်ဒို့လိုးမယ် မ၇ပ်မနားလေးပေါ့ကွယ် ခံစားကြည့်ပါကောင်မလေး၇ာ တသက်စွဲမှသေချာပါ
# Thursday, July 14, 2011 11:49:53 AM
# Tuesday, July 19, 2011 8:58:08 AM
ဆံပင်ကိုဆွဲပြီး ဖင်ဝကိုပိတ်ပြီး မြင်းစီးသလိုး တအား အောင့်အောင်လိုးလိုက်ချင်တယ်
# Thursday, July 28, 2011 10:15:38 AM
အားရှိပါးရှိ စိတ်တိုင်းကျလုပ်လိုက်ရရင်တော့ ထမင်းမေ့ ဟင်းမေ့။ အရမ်းလိုးလို့ကောင်းမှာ ။ပြောရင်းလုပ်ချင်လာပြီနော်
# Tuesday, August 9, 2011 11:41:41 AM
# Sunday, August 14, 2011 8:40:25 AM
ညီမရယ် ဘယ်လိုများလုပ်ပြနေတာလဲ လိုးချင်လွန်းလို့ဘောအောင့်လာပြီ
# Sunday, August 14, 2011 10:33:35 AM
လိုးတယ်ဆိုတာဘာကြီးလဲ။ lit.minkhant ကိုဆက်သွယ်ပါ။
# Thursday, August 18, 2011 8:08:43 PM
# Tuesday, August 23, 2011 8:52:03 AM
လိုးချငိတာ ယားလို့ ဘယ်လိုလိုးမလဲ ဆိုရင် စောက်ပတ်ကိုစောင်စောင်..................
# Wednesday, August 24, 2011 3:11:34 PM
# Tuesday, September 6, 2011 3:19:09 PM
လိုးချင်တယ် ဘယ်သူကိုလိုး၇မလည်းမသိဘူး ကျွန်တော်အခုထိဘယ်မိန်းခလေးနဲ့မှမထိတွေ့သေးဖူးဘူး
# Wednesday, September 7, 2011 2:30:45 PM
# Wednesday, September 7, 2011 3:50:18 PM
စောက်ရမ်စောက်ရမ်လိုးချင်တာပဲသိလာ ညီညီတောင်နေပြီလေ အုအု
# Thursday, September 8, 2011 9:34:41 AM
# Thursday, September 8, 2011 9:37:23 AM
# Thursday, September 8, 2011 3:46:30 PM
# Thursday, September 8, 2011 9:19:24 PM
# Wednesday, September 14, 2011 2:18:53 PM
# Monday, September 19, 2011 3:33:36 PM
မိုက်တယ်ဟေ့ ....ငါလိုးလိုက်ရလို့ကတော့ကွာ လီးကိုရွေချပြီးတော့တောင်လိုးပြစ်လိုက်မယ် စောက်စိကို စိန် စီ ထားလိုက်တော့ဟေ့
# Friday, September 23, 2011 1:38:09 PM
# Saturday, September 24, 2011 4:23:50 PM
# Saturday, September 24, 2011 4:24:51 PM
# Saturday, September 24, 2011 4:25:31 PM
# Tuesday, September 27, 2011 1:15:42 PM
lee gyi writes:
# Wednesday, September 28, 2011 6:53:51 AM
လိင်ဆိုတာ ကောင်းလည်းကောင်း မကောင်းလဲမကောင်းပဲ ချင့်ချိန်ကြပေါ့ သူငယ်ချင်းများ
# Friday, September 30, 2011 2:25:39 PM
human hunter writes:
ဆော်ချင်စရာကြီးပါလား ဒါတွေက အာရုံတွေပါ ချွတ်လိုက်တော့လည်းအတူတူပါပဲ
# Saturday, October 8, 2011 3:33:46 PM
# Monday, October 10, 2011 6:29:06 PM
တောက်..စောက်ဖုတ်ကိုဖြဲ.. အရေဗွက်ထအောင်မှုတ်ပြီးမှ လီးပါပြတ်ထွက်အောင် ဆောင့်ဆောင့်လိုးပလိုက်ချင်တာ... ဂွင်းတိုက်ရတော့မယ်... မင်းလေးကိုကြည့်ပြီး...
# Thursday, October 13, 2011 12:08:46 PM
sayarkhinzawhtun # Saturday, October 15, 2011 9:00:41 AM
# Monday, October 24, 2011 10:31:45 PM
နတ်ပြည်ရောက်မဲ့လူတွေတယ်များပါလားကောင်းပါတယ် အဖော်နဲ့သွားကြပေါ့ Unregistered user
# Friday, October 28, 2011 4:40:33 AM
# Monday, October 31, 2011 5:54:11 PM
# Wednesday, November 2, 2011 1:33:25 PM
# Wednesday, November 16, 2011 2:32:02 PM
you are very attract.
# Wednesday, November 16, 2011 2:46:49 PM
ကောင်လေး သန့်သန့် လေးကို ဆွဲပြီး ငါ့လီးကိုသူ့ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပြီးထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်
ပြီးတော့ ဖင်ကိုလိုးခြင်တယ်။ ငါ့လီးက]ကြီးတယ်နော်။
# Friday, November 18, 2011 2:28:13 PM
# Monday, November 21, 2011 1:48:00 PM
# Monday, November 21, 2011 1:50:45 PM
စောက်ပေါတွေ မစားကညှော်နေတာပဲ မင်းအမေမင်းပြန်လိုးပါလား
# Tuesday, November 22, 2011 3:44:20 PM
Ko dake gyi writes:
ဟဟ ဟုတ် တယ် ကိုယ်.မေ စက်ပတ် ကို တက် လိုး ကျ ကောင်းတယ် ~ Unregistered user
# Tuesday, November 22, 2011 3:45:11 PM
လိုး ကျ ကွာ လိုး ကွာ လိုးလိုး လိုး Unregistered user
# Thursday, November 24, 2011 4:30:22 PM
မင်းမေမင်းလိုးဆိုတဲ့ ကောင် မင်းကိုလိုးမယ် မင်းအမေလည်းလိုးမယ် မင်းအစ်မ ညီမ တစ်မျိုးလုံးကို လိုးပြစ်မယ်ကွာ ငါလိုးမသားလေး လီးမို့လို့ လာဆဲရတာလား လီးပဲ..
# Sunday, November 27, 2011 3:00:41 AM
# Friday, December 2, 2011 3:41:41 AM
sayarkhinzawhtun # Tuesday, December 6, 2011 2:23:45 PM
# Thursday, December 8, 2011 7:24:36 AM
# Thursday, December 8, 2011 3:57:11 PM
# Thursday, December 8, 2011 4:00:01 PM
ဖင် ရယ် ဆောက်ဖုတ် ရယ် လိုးပေးမယ်......။ လိပ်စာပေး နော်...........။
# Saturday, December 10, 2011 2:10:10 PM
Anonymou lu lu writes:
# Saturday, December 10, 2011 2:12:42 PM
# Tuesday, December 13, 2011 1:23:25 PM
# Wednesday, December 14, 2011 5:50:01 AM
# Wednesday, December 14, 2011 1:45:44 PM
# Wednesday, December 14, 2011 2:18:05 PM
# Wednesday, December 14, 2011 2:33:04 PM
စောက့်ဖုတ်ကိုမူတ်နှတ်ခမ်းလေးကိုစုတ်ပြီးတော့လေဖင်ကိုဖျဲပြီးလိုးတာပေါ့။ ကျွန်တော်ရင်ဖွင့်ရမယ်ဆိုရင်ညညဆိုကျွန်တော်လီးကတောင်တောင်နေတယ်ဗျာ။ ဒါနဲ့ပဲကျွန်လည်းထုပစ်လိုက်တယ်သူငယ်ချင်းတွေကပြောတယ်ဟေ့ကောင်မင်းထုတာများနေပြီတဲ့။ ကျွန်တော်ကပြန်ပြောတယ်ငါထုတာဆယ်ချီပဲရှိပါသေးတယ်လို့ပြောတော့သူငယ်ချင်းတွေကရီတယ်ကျွန်တော်ဘာမှားလို့တံုးဗျာစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ။ လိုးတော့လိုးကြည့်ချင်တယ်လီးသေးလို့မလိုးရဘူးဗျာဆေးရှိရင်ပေးပါဦးဗျာ။
# Wednesday, December 14, 2011 2:55:32 PM
# Wednesday, December 14, 2011 3:02:17 PM
ကျွန်တော့်ဘေးနားကမမကိုအရမ်းလိုးချင်နေပြီမရတော့ဘူး။လူကလည်းချောစောက်ဖုတ်ကလည်းဖွေးဆိုတော့မလိုးပဲနေချင်ပမလားဗျာ။ မအူပင်ကမမတွေကစောက်ဖုတ်တောင်နေလားမသိဘူးသုအကိုတွေတောင်မနေနိုင်ဘူး။ Unregistered user
# Wednesday, December 14, 2011 3:02:55 PM
# Wednesday, December 14, 2011 6:52:03 PM
စောက်ရမ်းပတမ်းလိုးပစ်လိုက်ချင်တယ်ကွာ့ herofromthehell@gmail.com writes:
# Monday, December 19, 2011 5:26:16 AM
# Tuesday, December 20, 2011 3:07:51 PM
# Thursday, December 22, 2011 1:46:45 AM
ko min writes:
# Tuesday, December 27, 2011 1:05:31 PM
# Sunday, January 1, 2012 10:46:15 PM
# Monday, January 2, 2012 3:38:02 PM
စောက်ပတ်ပြဲမသားတွေလိုးကြ လီးအားနေတယ်ဟုတ်လား။ စိတ်ကူးယဥင်္မနေနဲ့ မင်းတို့အမေတွေလဲတချိန်ကဒီလိုပဲအလိုးခံလာရတာ ။ မင်းယူတဲ့မိန်းမလဲ ပိုးစိုးပတ်စက်အလိုးခံရမှာ ။စက်ပတ်ပြဲမသားတွေရဲ့
# Tuesday, January 3, 2012 1:51:01 PM
# Sunday, January 8, 2012 8:17:33 AM
# Sunday, January 8, 2012 4:41:22 PM
htite ko writes:
# Sunday, January 8, 2012 4:42:53 PM
# Monday, January 9, 2012 6:16:09 AM
# Tuesday, January 10, 2012 8:51:58 AM
ဆော် ငယ်ငယ် ကော ဘဲ ငယ်ငယ် လေးတွေကော ခံချင်ရင်ဆက်သွယ်နော်......
# Wednesday, January 11, 2012 8:47:35 AM
ငါကတော့ စောက်ပတ်ကိုအားရပါးရမှုတ်ပြီးတော့မှ တက်လိုးတာ
ခုငါ့ဘေးနားကကောင်မလေး စကပ်တိုလေးနဲ့ သူပေါင်လေးကိုကြည့်ပြီးငါ့လီးကို
ကိုင်ကိုင်ဆွနေရတယ် သူ့ကိုပဲ ထလိုးလိုက်ရတော့မလားမသိဘူး Unregistered user
# Wednesday, January 11, 2012 3:26:34 PM
FIN YAR TU writes:
NIN TOE LOO CHIN YIN NGA SI LAR KYA FIN LAL KAN MAL LEE KYI KYI LAL SOUT PAY MAL NGA KA MDY Unregistered user
# Friday, January 13, 2012 3:16:56 AM
lee chit thu writes:
fin loo chin tu myar shi yin sat twal par naw i ka mdyka lee lal sout pay mal
fin lal shal kan mal ok
# Friday, January 13, 2012 3:20:54 AM
# Friday, January 13, 2012 4:06:09 AM
# Saturday, January 14, 2012 8:11:47 PM
# Monday, January 16, 2012 8:11:15 AM
min ka loe mel so top i ka vcd lood mel naw
# Monday, January 16, 2012 8:12:15 AM
# Wednesday, January 18, 2012 5:57:26 AM
# Saturday, January 21, 2012 4:53:08 AM
နာဘူးတွေ မင်းတို့သိပ်မိုက်ရိုင်းပါလား မင်းတို့ မှာ နှမတွေ အမေတွေမရှိကြဘူးလား......ငါလခွီး.......နှမချင်းမှမစာနာ.......သေရင် ခွေးဖြစ်မဲ့ကောင်တွေ...တောက်
# Tuesday, January 24, 2012 4:50:23 AM
# Tuesday, January 24, 2012 4:51:59 AM
# Thursday, January 26, 2012 4:59:20 AM
# Thursday, February 2, 2012 4:09:10 PM
# Friday, February 3, 2012 2:43:22 PM
# Sunday, February 5, 2012 8:48:37 AM
အဲလောက်လုပ်ချင်နေကြတဲ့ ကောင်တွေ ကိုယ့်ဖင်ကို လီုးပါလား မအေလိုီးတွေ လီးမပဲ
# Monday, February 6, 2012 1:07:01 PM
# Saturday, February 11, 2012 8:39:40 AM
# Saturday, February 11, 2012 8:45:00 AM
# Thursday, February 16, 2012 2:31:54 AM
အားလုံး မင်္ဂလာပါ ကျွန်တော့ကို ကျွန်တော် မိတ် ဆက်ပါ့မယ့်ခင်ဗျာ...။
နာမည် ... နှိုင်းမခ
အသက် ... 19
အရပ် ....5 ပေ 6
လူမျိုး .... ရျှမ်း/ဗမာ
sex ကိစ္စ နှင့် ဆက်သွယ်ခြင်သူများ...ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်...။
အထူး... ရိုးက Top ( လိုးသည် )ပါ
# Thursday, February 16, 2012 5:43:47 AM
ကျနော်ကတော့ထောင်ဗူးဝကထွက်လာတာမကြာသေးပါဘူး။။..ကျတဲ့ အမှုကတော့ မုဒိမ်းမှုပေါ့ ..အခုလဲ မိတ်ဆွေတို့အကူအညီလိုရင်တော့rockey.lay@gmail.com ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ခင်ဂျာ..။။။
# Thursday, February 16, 2012 4:27:50 PM
ငါလဲလိုးချင်လိုက်တာကွာ.ငါ့လီးကအမေရိကန်နော်မခံနိင်လောက်ဘူးထင်တယ်ဟ........ Unregistered user
# Thursday, February 16, 2012 4:29:57 PM
ငါလီးကတော့ တရုတ်လီးပဲဟေ့.............. အလိုးသန်တယ်ဟ ဂွင်တောင်တစ်နေ့5ချီထုထားတာ ဟ သူလေးဆိုလို့ကတော့..................
# Saturday, February 18, 2012 11:18:12 AM
# Saturday, February 25, 2012 1:29:55 PM
sexy boy writes:
အရမ်းကောင်းသောwebsite ပါ နောက်လည်းဒီထက်မက တင်နိုင်ပါစေ
# Saturday, February 25, 2012 1:32:32 PM
အရမ်းကောင်းသောwebsite ပါ နောက်လည်းဒီထက်မက တင်နိုင်ပါစေ လိုးချင်ပါတယ် sexywhiteboy.whiteprincess@gmail.com ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ Unregistered user
# Sunday, February 26, 2012 2:33:08 PM
# Monday, March 5, 2012 6:35:17 AM
# Thursday, March 8, 2012 4:08:43 AM
karyanlay 1992 အကောင့်ကိုသုံးတဲ့နိူင်းမခဆိုတဲ့ကောင်ကိုငါ့လီးကြီးနဲ.လိုးချင်တယ်ကွာသူငယ်ချင်းတို.ကူညီကြပါဦး
# Friday, March 9, 2012 5:28:35 AM
# Tuesday, March 13, 2012 2:24:43 PM
# Monday, March 19, 2012 2:47:23 PM
Phyo Wai Mg writes:
ငါလည်းနင်တို့လိုလိုးချင်တာပေါ့ ဒါပေမဲ့ ငါလို့ချင်တဲ့သူက မရလို့ပါ
# Tuesday, March 20, 2012 6:52:46 PM
# Thursday, March 22, 2012 3:05:30 PM
ိခံချင်တဲ့သူတွေရောလိုးချင်တဲ့သူတွေရောအားလုံး khanchinthu gmail.comကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ
# Thursday, March 22, 2012 3:11:03 PM
khanchinthu6969 g mail.com ကိုဆက်သွယ်လိုက်ကြနော်လိုးမဲ့သူရောခံမဲ့သူရော
# Saturday, March 24, 2012 8:40:55 AM
# Saturday, March 31, 2012 3:29:54 AM
ko yae writes:
# Thursday, April 5, 2012 7:03:18 AM
# Thursday, April 5, 2012 7:26:47 AM
# Friday, April 6, 2012 6:53:53 AM
# Monday, April 9, 2012 2:59:01 AM
ကျွန်တော်ကတော့ သူလေးကို အရမ်းချစ်တယ်ဗျာ၊
# Monday, April 9, 2012 6:09:54 AM
# Saturday, April 21, 2012 3:09:53 AM
# Sunday, April 22, 2012 9:03:05 AM
နင်က ဒုတ်ကောင်းလို့ စုပ်ကြောင်းပြောတာလား... ငါကတော့ အဖုတ်ကောင်းလို့ နင့်ကို လုပ်ကြောင်းပဲပြောချင်တယ်...ဟို ဘက်လှည့် လိုးပြီနော် ဇွတ် ဇွတ် ဖွတ်ဖွတ် .. ပလက်ပလက် ..နင်ဟာကြီးက ရွာက ထော်လာဂျီလိုပါဘဲလား... အောက်ဆီတွေအရမ်းထွက်နေတာ......သုံးချင်တော့ဘူး..
# Monday, April 23, 2012 2:32:33 PM
aung moe writes:
# Monday, April 23, 2012 2:33:02 PM
အား...... လိုးချင်တယ်ကွာ လီဗာကုန်ဂီယာကုန်ဟဲ အသားကုန် ဆွဲဖြဲလိုးလိုက်မယ် ဖွတ်ဖွတ် ဟာသွားပြီ ဆီပြတ်သွားပြီ Unregistered user
# Monday, April 23, 2012 2:42:43 PM
# Monday, April 23, 2012 2:56:19 PM
# Monday, April 23, 2012 3:00:41 PM
loe mar naw writes:
စောက်ဖုတ်လေးက ဖောင်းအိနေတာပဲနော် လိုးချင်လာပြီ ပြောရင်းနဲ့ ကို လီးကတောင်လာပြီသိလား ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့ သူ ငါ့ကိုလာပြီးဂွင်း ထုပေးစမ်းကွာ ပြီးရင် မင်းကိုဖင်ပြန်ုလိုးပေးမယ်နော်သယ်ရင်း
# Thursday, April 26, 2012 2:28:08 PM
aung aung writes:
# Friday, April 27, 2012 9:29:29 PM
# Sunday, May 6, 2012 12:20:06 PM
လိုးချင်သူများဆက်သွယ်ရန်....www.dog on the street.com ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
# Tuesday, May 8, 2012 7:15:03 PM
စောက်ရမ်းမိုက်တယ် တွယ်ချင်တယ်ကွာ စောင့်စောင့်ပြီးကိုလိုးချင်တာ အဲလိုဆော်မျိုးကို
# Tuesday, May 8, 2012 7:19:54 PM
၀င်ဆဲတဲ့ကိုယ်မေကိုယ်လိုးတွေ အားလုံးလီးဘဲ မင်းမေလိုးလား ငါလိုးမသားတွေ မင်းနှမမို့လို့လား ဖင်လိုးပစ်လိုက်မယ် ငါလိုးမသားတွေ လီးဘဲကွာ မနေနပ်ရင် ဖင်လိုးခံလိုက်ကြ လီးဘဲဟေ့ကောင်တွေ မစားရဘဲပြောတော့ မင်းတို့အပူလား နှမလိုးများရဲ့ ဖင်လိုးခံချင်နေလို့လား ကိုယ်မေကိုယ်လိုးများရဲ့ ငါလိုးမကမွေးတဲ့ငါ့သားများ အကုန်လုံးလီးဘဲကွာ မင်းမေလိုးလား လီးဖြစ်လားပြောတာ့ မင်းနှမဆိုရင် ဖင်ပါကိုလိုးပစ်လိုက်အုံးမယ် ကိုယ်မေကိုယ်လိုးရယ် မင်းမကျေနပ် မင်းပါဝင်ပြီးဖင်ခံလိုက်ဟေ့ကောင်တွေ လီးလားကွာဆဲတော့ဘာဖြစ်လဲ မကျေနပ်တဲ့ကောင် ဖင်လိုးခံလိုက်ကွာ မင်းမေလိုးလား
# Saturday, May 12, 2012 6:10:06 PM
# Saturday, May 19, 2012 8:05:50 AM
# Sunday, May 20, 2012 6:49:01 AM
လီးကောင်းသည် အလိုသန်သည်။ Unregistered user
# Wednesday, May 23, 2012 2:08:12 PM
# Wednesday, May 23, 2012 2:33:44 PM
095031637 နေမင်နှိင် အမြန်ဆက်သွယ်ပါ
# Thursday, May 31, 2012 4:50:22 AM
ခေါ်ချင်တယ်ဗျာ လိုးဖို့ သိရင် ဒီအကောင့်ကို
# Saturday, June 2, 2012 6:43:19 AM
သူ့ပုံစံကိုက မပြောလိုက်ချင်ဘူး တင်ပါးမှာအပေါက်ဖောက်ထားသေးတယ် တင်ပါးကလည်းဖြူဖြူဖွေးဖွေးလေးဆိုတော့ အရမ်းကိုင်ချင်မိတယ် ငါတို့ကို စိတ်လာဆွနေတယ် တစ်ခါလောက်မနာတမ်းလိုးလိုက်ရရင်ပုံပျက်သွားမယ် ပြောရင်ဆိုရင်း အခုဘဲလိုးချင်လာပြီ
# Monday, June 4, 2012 8:04:05 AM
# Wednesday, June 6, 2012 4:45:29 AM
အမ နာမည်လေးနဲ့ ဖုန်းနံပါတ် Email လိပ်စာပြောပြရင် ကျေနပ်ပါပြီ...
# Saturday, June 16, 2012 6:31:36 PM
လေးဘက်ကုန်းခိုင်းပီး ဆံပင်ကိုဆွဲ လက်တစ်ဖက်ကဖင်တချမ်းကိုကိုင် စောက်ထည့်လိုက်ရင်သုံးရက်သေးမပေါက်နိုင်ဖြစ်သွားမယ် .. နောက်လည်းတင်ပါဦး လီးတောင်တယ်...
# Tuesday, June 19, 2012 6:31:47 PM
Ever လန်း writes:
# Monday, August 6, 2012 12:27:18 PM
သူငယ်ချင်းတို့ လိုးချင်ရင်တော့ alwaysremember2011@gmail.com ကို အက်ပေးလိုက်ပါနော် ... Unregistered user
# Monday, August 6, 2012 12:31:38 PM
တကယ်ပြောတာပါ အကောင့်ကိုအက်ပေးနော် alwaysremember2011@gmail.com ရန်ကုန်မှာနေတယ် Unregistered user
# Saturday, January 26, 2013 12:25:54 PM
လို့ချင်းတယ် စောက်ပတ်ကို ပြောပေကျပါ
Myanmar Actress Model (7).jpg
FUJIFILM FinePix S3Pro Original resolution